Kucikeke umphakathi kuhlehla icala | IOL Isolezwe
Kucikeke umphakathi kuhlehla icala
Isolezwe / 2 August 2012, 2:24pm /
UKUHLEHLISWA okwesibili kwecala lokudlwengula elibhekene nowesilisa (19) waseLusikisiki e-Eastern Cape eNkantolo yesifunda eScottburgh kwenze inhlangano elwa nokuhlukunyezwa kwezingane i-Thobeka Madiba Zuma Foundation ukuba itoyitoye ngaphandle kwale nkantolo ngoLwesibili.
Amalungu ale nhlangano ebiholwa ngumama wesizwe uNkk Thobeka Madiba Zuma akhuze iziqubulo ebezigqamisa ukungahambisani nokuhlukunyezwa kwezingane egcizelela ukuba kwenzeke ubulungiswa ngaleli cala obekungokwesibili lingena kule nkantolo ngokuthi umsolwa agwetshwe.
Bebebuye bagxume sakubhikisha belibeka ngembaba elokuthi umsolwa uMnuz Lindiwe Nkotheba kufanele aboshwe adonse ejele ngoba ukuhlehliswa kwalo kuvusa izilonda ebeseziphola emndenini wommangali.
“Nginethemba lokuthi ekugcineni lo mfanyana oneminyaka engu-7 uzogcina ebutholile ubulungiswa ngokwenzeka kuyena ngo-2010 ngesikhathi edlwengulwa,” kusho uNkk Zuma.
Uthe okwamanje wenelisekile ngendlela inkantolo eliphethe ngobunono ngayo leli cala yize libucayi kangaka.
Ngesikhathi ethula ubufakazi obebuqoshwa bukhoma yikhamera ebibukelwa eNkantolo ngokwenzeka kuyena, ummangali uvuse uhlevane esenekela iNkantolo imininingwane yobuqili obasetshenziswa ngumsolwa emyenga aze ayongena naye endlini yakhe engumjondolo ngaphambi kokumdlwengula.
IMantshi uMnuz Kwazi Shandu ilihlehlisele u-Agasti 24 icala njengoba kusaqoqwa obunye ubufakazi.